Jiri akaụntụ Hangouts gị na Ozi maka Mac | Esi m mac
Jiri akaụntụ Hangouts gị na ngwa Ozi maka Mac
Anyị na-enwekarị mmasị na ngwa ndị na-arụ ọtụtụ omume n'otu oge. Inwe otu interface ebe ị nwere ike ịnweta ozi niile bụ nhọrọ dị oke mkpa ma chekwaa anyị nnukwu oge. Nke a oge anyị ga-amata otu esi etinye aka na akaụntụ Hangouts na ngwa Ozi, iji kpọtụrụ ndị ọrụ nke netwọk ozi a, yana izipu ụdị faịlụ niile, emoticons, niile jikọtara n'ime ngwa ahụ n'onwe ya. N'ime nkuzi a anyị kọwara etu esi ahazi akaụntụ google ma ọ bụ okwu google, ka ụfọdụ siri mara ya.
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ imeghe ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịnweghị ya dị, ịnwere ike ịkpọku ya mgbe niile site na nchapụta, na ịpị oghere Cmd +. Ozugbo anyị mepere ngwa ahụ, pịa ederede, ozi, nke dị na elu akaekpe, n'akụkụ aka nri apụl ahụ. Nhọrọ nke atọ bụ Tinye akaụntụ. Anyị ga-pịa ya.
Ọzọ, ọ ga-egosi anyị obere menu, ebe ọ ga-ahapụ anyị ịhọrọ ọrụ anyị chọrọ ịdebanye aha. N'okwu a, anyị ga-pịa Google ma họrọ n'ihu. Ruo oge ụfọdụ ugbu a, mgbe anyị chọrọ ịdebanye aha ọrụ google, obere windo na-apụta, dị ka ihe nchọgharị ahụ, ebe anyị ga-egosirịrị ozi email ahụ e kenyere na akaụntụ ahụ nke google nke anyi kwesiri igwa site na Hangouts.
Mgbe usoro a gasịrị, ị ga-enwe ike ikwurịta okwu na kọntaktị gị site na ịhọrọ akaụntụ google.
O nwere ike ịbụ na ị rụọ ọrụ nyocha abụọ maka Google (dịka o kwesiri), n'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-ewepụta otu paswọọdụ maka ngwa iji mepụta ozi na Mac. N'ikpeazụ, gwa gị na ọ bụrụ bụ onye ọrụ nke AOL, ị nwere ike ịme otu usoro ahụ, naanị site na ịhọrọ nhọrọ AOL kama Google.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Jiri akaụntụ Hangouts gị na ngwa Ozi maka Mac
Super PhotoCut Pro, oge inye onyinye dị oke egwu
Tinye ngwa batrị site na iji ngwa ntachi obi